कस्तो छ, बुधबार तपाईको भाग्यफल ? – Satyapati
कस्तो छ, बुधबार तपाईको भाग्यफल ?
२०७७ फागुन १२ गते, बुधवार, २४ फेब्रुअरी २०२१ । माघ शुक्लपक्ष द्वादशी तिथि (१५ः५६ बजेदेखि त्रयोदशी), पुनर्वशु नक्षत्र (११ः२६ बजेदेखि तिष्य), चन्द्रराशि– कर्कट ।
मिहिनेत परे पनि भविष्यका लागि जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ । आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ । शक्तिको धाक देखाउनेहरू स्वतः निहुरिनेछन् । धार्मिक र सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ । रोकिएको कामले पनि निकास पाउनेछ । परोपकारी काममा खर्च गरिनेछ । आजको मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउनेछ ।
केही खर्च लागे पनि घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ । भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ । अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ । परिस्थिति अनुकूल नदेखिए पनि भौतिक सुविधा प्राप्त हुनेछ । स्वादिष्ट खानपानमा मन रमाउनेछ । व्यवसायको सन्दर्भमा पनि रमाइलो यात्रा हुनेछ । घरपरिवारमा भने केही असमझदारी देखापर्न सक्छ, सजग रहनुहोला ।